Noqo khabiir ku takhasusay jabsiga iyo internetka | Laga soo bilaabo Linux
Luigys toro | | GNU / Linux, Lagu taliyay
Dhamaan akhristayaasha 'Linux' waa inay cadeeyaan waxa loola jeedo 'hacker', tan iyo saaxiibkeen ChrisADR iyaga uma sharxin iyaga si faahfaahsan oo ku filan maqaalka Waa maxay 'hacker' runti macnaheedu, buuqii uu maqaalkani sababay, wuxuu kudarey booqashooyin badan oo noo yimaada si aan u raadino macluumaad kusaabsan Jabsiga iyo Amniga internetka, oo ay weheliso waaya-aragnimadeenna adag ee aan ku difaaceyno server-keena, ayaa leh "waajib ku ah" inaad isku daydo si walba inaad ku takhasusto oo aad waxbadan ka barato aaggan xiisaha leh.
Waa inaan si cad u qeexnaa taas Hadafkeenu ma ahan in jabsiga iyo ku darsiga aqoonta loo adeegsado cidna ", foorari, Waxaan dooneynaa isticmaaleyaasheena iyo guud ahaan adduunka inay awood u yeeshaan inay si tartiib tartiib ah u bartaan farsamooyinka iyo fikradaha u oggolaanaya inay iska difaacaan weerarrada waxyeellada leh, ama ku guuldareysato inay awood u leeyihiin loo abuuro siyaasado amni oo ka caawiya inay baabi'iyaan fursadaha lagu soo weerari karo.
Anigu takhasus gaar ah uma lihi aagga, laakiin haddii aan muddo dheer ka soo shaqeynayey meelaha amniga kombiyuutarka aad loo adkeeyo, Sidoo kale waa inaan maareeyaan borotokoolka amniga macaamiishayda, laakiin waxa ka sarreeya dhammaan heerka barnaamijyada aan diiradda saaray abuuro oo adeegsado farsamooyin si codsiyadayda looga dhigo kuwo ammaan ah. Waxaas oo dhan waxaan rabaa in aan idhaahdo si ka soo horjeedda waxa dadku u malaynayaan, farsamooyinka jabsiga, si kasta oo ay u fududaan karaan ama u casriyayn karaan, waxay ku yeelan karaan saamayn wanaagsan nolosheena maalinlaha ah, taas oo noo oggolaanaysa inaan helno kombiyuutarro iyo barnaamijyo amni badan , ka hortagida marar badan qarsoodigayaga waa la jabiyay, iyo sidoo kale dammaanad qaadka sharafta xogtayada.
Dhammaan wixii kor ku xusan ka dib, ma ahan inay qarsoodi u ahaato midkeenna oo ay tahay inaan qabanno si sax ah wax uga bartaan Hacking-ka iyo Amniga internetkaWaan sameynayaa, waa waddo madadaalo ah, oo la yaab leh, laakiin waxa ka sarreeya oo dhan waddo tilmaamaysa wax badan oo halis ah iyo hagitaan ku filan si aanan ugu dhammaan farsamooyinka aan inta badan lagu talin. Waxaan ku bilaabay akhris aad u kala firidhsan, laakiin waxaan ku guulaystay inaan qaato koorso aan u arko inay ku habboon tahay tan Koorso Jabsiga Anshaxa oo Buuxda, Koorsadani waxay ii oggolaatay inaan yeesho aqoon adag oo ku saabsan fikradaha, xeerarka iyo heerarka maalinba maalinta ka dambeysa laga qabanayo aagaggaas, marka lagu daro inay igu hagayso abuuro shaybaar ii gaar ah oo aan ku raadsado nuglaanta iyo hanjabaadaha oo aan markaa isku dayo inaan ku dhajiyo iyadoo la adeegsanayo farsamooyinkii laygu baray koorsada.
Kuuboonku wuxuu shaqeyn doonaa laga bilaabo Janaayo 6, 2018
Kuuboonku wuxuu beddelay dhimista dhimista iyadoo lagu saleynayo kororka qiimaha asalka ah ee abuuraha koorsada. Iyadoo aan loo eegin qiimaha, koorsada waxaa lagu kobciyay cusbooneysiin cusub
Sidii koorsooyinkii hore, waxaan ku guuleystey inaan helo kuub si dadka isticmaala DesdeLinux ay ku heli karaan koorso la yiraahdo qiimo qaas ah 7da maalmood ee soo socda, kadib tan isku xirka awood u yeelan doonaan si joogto ah ugu raaxeysto koorsada oo leh qiimo dhimis 90% 75% . Si la mid ah, waxaan go'aansaday inaan sameeyo dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan koorsada si aan fikrad uga helno waxa aan ku guuleysaneyno iyo dareenkeyga shaqsiyadeed ee ku saabsan waxyaabaha uu ka kooban yahay, qaab dhismeedkiisa, habka waxbarashadiisa, iyo kuwo kale.
1 Hordhaca Jabsiga iyo Nabadgelyada internetka.
1.1 Macluumaadka Farsamada Koorsada
1.2 Ku saabsan macalinka iyo habka barashada
2 Gabagabada shaqsiyeed
3 Koorso laxiriira Hacking iyo Amniga internetka
Hordhaca Jabsiga iyo Nabadgelyada internetka.
Macluumaadka Farsamada Koorsada
Koorsadani waa oo ka kooban 104 fiidyow, oo isugeynaysa in ka badan 16 saacadood oo ciyaaro ah, oo leh dukumiinti ballaaran, dhammaantood Isbaanish waxaana loo jiheeyey a dadweynaha dhammaan heerarka waxbarasho. kaas oo bixiya shahaadada dhammaystirka, helitaanka koorsadu waxay ka timid Udemy Platform oo aad ka heli karto barowsar kasta oo sidoo kale leh Barnaamijyada Android iyo Ios.
Koorsadani waa 100% aragti - wax ku ool ah, oo leh hageyaal tixraacyo badan, sidaa darteed inta lagu gudajiro waxaad baran doontaa farsamooyin laakiin sidoo kale waxaad ku dhaqmi doontaa wixii aad soo baratay, qayb kastaa waxay leedahay banaanbax iyo waxyaabaha kaabaya.
Ku saabsan macalinka iyo habka barashada
Eduardo Arriols Nunez wuxuu ina barayaa si cad oo hufan oo ku saabsan jabsashada iyo amniga internetka ee koorsadiisa Hordhaca Jabsiga iyo Nabadgelyada internetka, tusaalooyin tusaalooyin ah iyo banaanbaxyo dhab ah oo ka dhaca deegaanno la koontaroolo iyo kuwo aan la xakamayn karin, inta lagu guda jiro koorsada waxay na siinaysaa talooyin wax ku ool ah, marka lagu daro koorsada guud ahaan waxay leedahay jaaliyad aad u firfircoon oo wadaagta macluumaadka uu macallinka ansaxiyay.
Koorsadani waxay u qaybsan tahay lix qaybood oo ku jihaysan sidan soo socota
Cutubka 1: Kani waa cutub si cad loogu talagalay in lagu bixiyo baaxada koorsada, soo bandhigida fikradaha aasaasiga ah iyo, wax kasta oo ka sarreeya, oo bixiya talooyin badan oo suurtagal ah oo kuu oggolaanaya inaad ka faa'iideysato koorsada.
Cutubka 2: Iyada oo loo marayo 6 fiidiyow oo 10 daqiiqo isku celcelis ah, horudhac aad u xiiso badan oo ku saabsan Habdhaqanka Anshaxa iyo Nabadgelyada internetka ayaa la siiyaa, halkaas oo nalagu bari doono fikradaha aasaasiga ah ee amniga iyo xisaabinta, marka lagu daro inaad na siiso tababarka lagama maarmaanka u ah inaan awood u yeelanno inaan falanqeyno noocyada kala duwan iyo dulqaadlayaasha weerarka hababka amniga iyo amniga.
Cutubka 3: Cutubka seddexaad wuxuu noo ogolaanayaa inaan barto sameynta shaybaarradeena tijaabada, halkaasoo hufnaanta weerarada iyo mashiinada nugul ay noqon doonaan xudunta xiisaha aan u qabno, marka lagu daro Eduardo wuxuu na siinayaa gorfeyn weyn oo ku saabsan qeybsiga ugu weyn ee loogu tala galay anshax xumada anshaxa wuxuuna naga digayaa kuwa inay leeyihiin nooc ka mid nuglaanta (loogu talagalay inay bartaan inay wax u dhimaan nidaamyada iyo adeegyada).
Cutubka 4: Sida loo filayo distoorka Eduardo ku taliyay in la barto oo laga faa'iideysto jabsiga anshaxa waa Kali Linux, marka cutubka afaraad waxaa si qoto dheer naloogu baray maaraynta nidaamka qalliinka, aaladaha ugu muhiimsan ee laga heli karo distoorkaan waa la aqoonsaday, waxaan nahay la siiyay tababar wanaagsan oo ku saabsan adeegsiga qalabka loo yaqaan 'Console' waxaana naloo baray inaan ku horumarinno qoraallo ku saabsan baska shaqooyinka.
Cutubka 5: Cutubka shanaad wuxuu u jihaysan yahay aqoonsi la'aan internetka, halkaasoo si cad oo sax ah naloo siiyay hordhac iyo taxane ah fikradaha aasaasiga ah ee la xiriira adeegsiga shabakadaha magac la'aanta, si la mid ah, waxaa naloo baray inaan rakibno oo aan isticmaalno qalab aan la aqoonsan sida TOR, FreeNet, l2P, ku dhowaad wakiillada, adeegyada VPN iyo kii ugu dambeeyay laakiin uguyaraan waxaa naloo baray sida loo abuuro barxadkeenna qarsoodiga ah.
Cutubka 6: Qeybta ugu dambeysa waxay noo diyaarineysaa adduun adag oo dhab ah, halkaas oo maalin kasta aan la kulanno nuglaansho iyo in haddii aan la helin habab difaac oo ku filan la doonayo in nala saameeyo, waxaan baran doonnaa ka hortagga ka hortagga injineernimada bulshada iyo hab maamuusyo ku filan oo aan ku wadaagno macluumaadka, si siman sidan, waxaan awoodi doonnaa inaanu ku ogaano oo aan uga faa'iideysano nuglaanta tirada badan iyadoo la adeegsanayo farsamooyin iyo qalab taxane ah oo Eduardo uu na bari doono sida loo isticmaalo. Qeybtani waa tan ugu weyn dhamaanteed waxayna leedahay 65 fasal, halkaas oo si aad u faahfaahsan aad ku baran doonto meelaha ugu qalafsan ee la xiriira Hacking Anshaxa.
Unugyadu waxay soo bandhigaan fiidiyoowyo iyo dukumiintiyo kaladuwan oo dhammaystiraya mid kasta oo ka mid ah barashada, iyadoo imtixaanno si dhab ah u muujinaya xirfadaha la soo helay, shaki la'aan ay tahay koorso wanaagsan in laga bilaabo dunidan weyn ee jabsiga iyo amniga internetka.
Haddii aad khabiir ku tahay jabsiga iyo nabadgelyada internetka, koorsadan waxaad ka heli doontaa aasaas farsamo oo dib u qiimeyn kara aqoontaada, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad xaqiijiso farsamooyinka aad u badan tahay inaadan aqoon oo waxaad yeelan doontaa suurtogalnimada inaad la fal gasho wax ka badan 700 oo arday oo iska diiwaan galiyay khibradan weyn.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ah in koorsadu 'nool tahay'. Tani waxay tusineysaa in fiidiyowyo cusub la soo dhejin doono bil kasta, sidaa darteedna, qiimaha koorsada loo kordhin doono ardayda cusub. Dhammaan ardayda horeyba u soo qaatay koorsada hore, waxay heli doonaan marin aan xadidnayn oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha cusub ee la soo saaray.
Ugu dambeyntii, hordhaca koorsada waxaa laga arki karaa fiidiyowga hordhaca ah ee ku yaal Udemy, waxaan rajeynayaa inay kuu anfaci doonto oo aad ka faa'iideysan doonto cupón si ay u keydsadaan lacag haddii ay rabaan inay helaan, maaddaama guud ahaan qiimaha koorsadu yahay $ 120 oo leh qiimo dhimis waxay noqon doontaa 10,99 $ 29,99 $.
Koorso laxiriira Hacking iyo Amniga internetka
waxaan hadda sameyneynaa koorso la xiriirta oo la yiraahdo Hordhaca Jabsiga iyo Nabadgelyada internetka, waxay ka kooban tahay 56 fiidyow, wadar ahaan in ka badan 8 saacadood oo dib loo maqal ah, oo ka kooban in ka badan 250 bog oo macluumaad faahfaahsan leh, dhammaantoodna ku qoran Isbaanish waxaana loogu talagalay dhagaystayaasha dhammaan heerarka waxbarasho. Waxay leedahay 7 imtixaan oo loo qaybiyey heerar waxayna bixinayaan shahaadada dhammaystirka ... Waxaan sidoo kale helnay kuuboon laakiin waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ku wadaagno maqaal kale, deg-degga ah iyo inaan kaa caawiyo tababarkaaga, halkan ka tagay link kuuboon ah ee koorsadan si ay ugu kacdo $ 10,99.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Noqo khabiir ku takhasusay jabsiga iyo internetka
Kuuboonku wuxuu u muuqdaa inuu shaqeynayo. Waxay na siineysaa qiimo dhimis 75% ah waxayna joogi doontaa 29,99 euro… sida dadka intiisa kale ee soo gashay bilaa biibis.
Jawaab Juan Martin
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay, runti waan la xiriiray kooxda Udemy, kumbuyuutarkuna wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo berrito, marka waan ka xumahay in maanta aan la helin ... Hada waxaan qoraal uga tagi doonaa maqaalka iyo maalinta berri ah cusbooneysii markale markii kuuboonku shaqeynayo ..
Wali ma shaqeynayo
Waxaan ku cusbooneysiinnay qodobka asalka ah wax ka bedelka iyo talooyinka lagama maarmaanka ah, nasiib daro sababo ka baxsan awoodeena, coupon wuxuu bixin karaa oo kaliya 25% qiimo dhimis ah si ay ugu kacdo $ 29,90 ... Si la mid ah, waxaan si aad ah ugu caddaynay faallooyinka oo lagu daray kuuboon koorso la mid ah.
AMigo iga raali noqo, waxaan ka imid Venezuela waxaanan xiiseynayaa koorsada laakiin maahan inaan bixiyo lacagtaas.
Waad aamusantahay, sii wad inaad u codeyso Maduro.
Jawaab Héctor Padró
casaanka anti dijo
Wixii noo haray, dawarsadayaasha adduunka.
Ka jawaab cas-cas
Aniguba waxaan ka imid Venezuela laakiin ma fahmin waxa ay faallooyinka raadinayaan.
Gacaliye subax wanaagsan! Waxaan gujinayaa xiriirka iyo kootada oo sicir-dhimista la sheegay ma muuqato, waxaan rabaa inaan sameeyo koorsadan.
MAGAALADA SATO Arevalo dijo
Waxaan haystaa kaar leh qadarka qiyaasta, laakiin waxay umuuqataa in kuubanuhu uusan firfircooneyn.
Jawaab ANGEL SATO Arévalo
Qaali, Ma haysaa fikrad goorta ay kuuboonku shaqeyn doono? Aad baad u mahadsantahay.
Kuuboon dhimista weli ma muuqdo
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalka !!!!! Fadlan ma noo sheegi kartaa goorta dhimista la heli doono? Farxad
Ku jawaab Yoan
Maqaalka wuxuu ku leeyahay sicir-dhimista waa 90% laakiin dhab ahaan waa 75% .. 🙁
Ku jawaab Linuxita
Anigu waxaan ahaa isticmaale udemy dhowr sano waxayna badanaa dhigaan qiimo dhimis kala duwan oo u dhaxeysa 50% ilaa 90%. Waa arrin sugid ah 90% dalab in dib loo dhigo haddii aadan awoodi karin qiimaha dhabta ah ama dhimista 75%.
Kaliya waxaan soo iibsaday koorso java ah oo ku taal Udemy waxaanan ka fikirayaa inaan sidoo kale iibsado koorsada anshax jabinta anshaxa, ma ogtahay haddii dalabyada si joogto ah loo qaato, ama haddii ay dhammaadaan maalinta boggu sheegayo ama haddii ay kordhiyaan dhawr maalmood oo kale?
Ku jawaab AlbertoC
Xagee ka helaa kuuboon si ay u noqoto $ 10.99?
Ku jawaab rarmando
hello, wax cusub miyaad ka ogtahay kuubanka?
Ku jawaab alvar
Koorsadu waxay umuuqataa mid xiiso leh, laakiin koodhku ansax maahan ama maahan koorso.
Jawaab Jorge Perez
Waxaa laga yaabaa haddii aad na siisay lambarka kuuboon aan isticmaali karno… 🙂
Miyaad dhejin doontaa lambarka kuuboon si aan u adeegsanno?
Ku jawaab Pruden
Wax ma ka ogtahay kuubanka?
Niman yahow, waan xaqiijiyey in kuuboonku u shaqeynaynin sidii la rabay, waxaan dhowr jeer u qoray qofka masuulka ka ah inuu na siiyo dallacaadda Udemy, laakiin nasiib darro wuxuu ku maqanyahay fasax ku yaal Cuba oo aan xiriir badan lahayn ... Isla marka kuubanka la saxo, waxaan dirayaa mid cusub riix si qof walbaa u ogaado waxaanan uga jawaabayaa mid kasta oo ka mid ah kuwa xiiseynaya si ay u helaan ogeysiis ...
Waan ka xumahay in kuuboonku uusan si sax ah u shaqeynin, waxaana rajeynayaa inaad dhawaan ka faa'iideysan doontaan oo aad ku heli kartaan koorsooyin aad u wanaagsan qiimo aad u jaban.
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka Lagarto. Waxaan sugeynaa kuubis la dhaho !!!!
.Dayaanna 29 dijo
Mahadsanid, waan daawan doonaa.
Ku jawaab skynet29
Laakiin kuuboonku wuxuu wada khuseeyaa dalabka hadda jira mise waa kuubbo gooni ah oo kaaga tagaysa qiimo dhimis 90% ah ???
Kuuboonada qiimaha koorsadu waxay noqon doontaa 10.99 $
ok iyo qiyaas ahaan maalmaha, markii kuuboonku soo baxo ??? iyo Grax
Galab wanaagsan, sicir-dhimista 90% wali ma muuqato. Waxaan xiiseynayaa qaadashada koorsada. Miyaad ila socodsiin kartaa markaan abaalmarin karno? Waan daawan doonaa, laakiin haddiiba ay dhacdo. Koorsada ka muuqata bogga udemy oo leh qiimo dhimis 90% ah iyo qiimo dhan 10,99, waa mid ka mid ah 25 saacadood, Ingiriisiga.
Waxaan rabaa coupon haddii aan xiiseynayo koorsada laakiin ma awoodi karo qiimaha dhabta ah ee koorsadan 🙂
Waxaan sidoo kale sugayaa kuubanka (:
Ku jawaab Tairosonloa
Wanaag sidoo kale saf ayaan ugu jiraa koobiga koorsadu u muuqato mid wanaagsan 😉
Waad mahadsan tihiin waxaanan fursaddan uga faaiidaysanayaa inaan kuugu hambalyeeyo barta, taas oo ah mid aad u wanaagsan, in kasta oo aan caajis ahay oo aan waligay qorin faallo.
Salaan ka timid Bielefeld !!!
Ku jawaab Riquelme
Guys waxaan aakhirkii helnay jawaab la xiriirta kuuboonkii naloo keenay si ay dhamaan dadka isticmaala desdelinux ay ugu helaan koorsada lacag dhan $ 10,99, nasiib daro kumbuyuutarkaan looma isticmaali karo marka laga reebo $ 30 halkii koorso Kuwa kale ereyada, qiimo dhimis 75%, tan maxaa yeelay isticmaalaha curiyay koorsada ayaa kordhiyay sicirkiisa oo barnaamijku wuxuu kaliya u oggol yahay qaddarkan ugu yaraan (waan ka xumahay inay taasi dhacday) Shaqaalaha Udemy ayaa isku dayay inay la xiriiraan adeegsadaha si ay heshiis ula gaaraan, laakiin sida muuqata kama aysan jawaabin sababo la xiriira fasaxooda.
Hadda waxaan sameyneynaa koorso la xiriirta oo la yiraahdo Hordhaca Jabsiga iyo Nabadgelyada internetka, waxay ka kooban tahay 56 fiidyow, wadar ahaan in ka badan 8 saacadood oo dib loo maqal ah, oo ka kooban in ka badan 250 bog oo macluumaad faahfaahsan leh, dhammaantoodna ku qoran Isbaanish waxaana loogu talagalay dhagaystayaasha dhammaan heerarka waxbarasho. Waxay leedahay 7 imtixaan oo loo qaybiyey heerar waxayna bixinayaan shahaadada dhammaystirka ... Waxaan sidoo kale helnay kuuboon laakiin waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ku wadaagno maqaal kale, deg-degga ah iyo inaan kaa caawiyo tababarkaaga, halkan ka tagay link kuuboon ah ee koorsadan si ay ugu kacdo $ 10,99.
Si la mid ah koorsadani waa raaxo, tan iyo Paco sepulveda wuxuu ina barayaa si cad oo sax ah oo ku saabsan jabsiga iyo amniga internetka, oo leh tusaalooyin sawir leh iyo banaanbaxyo dhab ah oo ka dhaca deegaanno la koontaroolo oo aan la xakamayn
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka!
webiga zaf dijo
Ma ogtahay in kuuboonku wali shaqeynayo?
Ku jawaab zaf webiga